2019 ugu caansan Peptide Degarelix: Waa dawo loo isticmaalo Kansarka Qanjirka 'prostate'
1. Waa maxay Degarelix?
2. Maxaa loo isticmaalaa budada Degarelix?
3. Farsamaynta budada Degarelix ee Ficilka
4. Isdhaxgalka Degarelix
5. Ma jiraan wax khatar ah haddii aan waayo qaddarka 'Degarelix' ama xad-dhaafka ah?
6. Waa maxay waxyeelada iyo digniinaha Degarelix Sababta?
8. Macluumaad Dheeraad ah
Cilmiga casriga, kansarka qanjirka 'prostate' ayaa noqday mid ka mid ah cudurada halista ku haya caafimaadka jidhka iyo maskaxda ee ragga. Ka hortagga hore iyo daweynta ayaa lagama maarmaan u ah daaweynta cudurkan. Budada Degarelix waa dawo waxtar u leh daaweynta kansarka qanjirka 'prostate', waana inaan qaadanaa dadaal si aan u fahamno qaar ka mid ah macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan si aan u adeegsan karno si habboon oo nabad ah.
Degarelix (214766-78-6) waa daawo daaweyn hormoon ah oo yareynaysa xaddiga hormoonnada jirka, oo ay kujirto testosterone. Waxaa lagu kala soocay nooc dawooyin ah oo loo yaqaan gonadotropin-hormone sii daayo (GnRH) antagonists. Daawadan 'peptide synthetic' ee dhijitaalka ah waxaa lagu yaqaan magaca magaceedu yahay “Firmagon”. Waxyaabaha soo socdaa waa qeexitaanadooda:
Fasalka Daroogada: Analogue GnRH; Mucaaridka GnRH; Antigonadotropin
Qaaciddada Kiimikada: C82H103ClN18O16
Mass Molar Mass: 1630.75 g / mol g · mol − 1
Jidadka Maamulka: mudis hoosaad
Ka-reebitaan: Qandho (70-80%), Kaadida (20-30%)
Bixinta Half-Life: 23-61 maalmood
Budada Degarelix waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo kansarka qanjirka 'prostate'. FDA waxay oggolaatay daawada loogu daweeyo kansarka qanjirka 'prostate' ee bukaanka Mareykanka ee 24th Diseembar, 2008. 17th Febraayo, 2009, Guddiga Yurub wuxuu raacay dacwad oo wuxuu oggolaaday daawada Degarelix ee loogu talagalay in lagu isticmaalo bukaannada waaweyn ee ragga ah ee qaba kansarka qanjirka 'prostate'.
Ogsoonow in Durista Degarelix waa in ay maamusho dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad xarun caafimaad. Degarelix ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa ujeedooyin kale. Tusaale ahaan dalka Iswidhan, daroogada ayaa loo bartay in loo isticmaalo sidii wakiilo kiimikada loo adeegsado oo lagu durayo dembiilayaasha galmada. Daaweynta kansarka naasaha Degarelix sidoo kale waxaa loo tixgelinayaa inay tahay daaweyn kale oo loogu talagalay kansarka naasaha ee ragga.
Dhakhtarkaaga ayaa kugula talin kara dawadan xaaladaha kale. Haddii aadan hubin sababta aad u qaadatid dawadan, waxaa muhiim ah inaad la hadasho dhaqtarkaaga. Sida daawooyinka kale, waa inaadan siinin Degarelix qof kale, xitaa haddii ay leeyihiin astaamo la mid ah kan aad leedahay. Tani waa sababta oo ah daroogadu waxay noqon kartaa waxyeello haddii la qaato iyada oo aan dhakhtarku sheegin.
(1) Waa inaad ogaataa wax dheeri ah ka hor intaadan qaadan Degarelix
Waxyaabaha soo socdaa waa qaar muhiim ah oo ay tahay in la ogaado ka hor qaadashada dawadan:
Degarelix wuxuu sababi karaa dhalmo la'aan lab. Haddii aad rajaynayso inaad aabbe noqoto mustaqbalka, waxaa muhiim ah inaad la hadasho takhtarkaaga. Waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso kaydinta shahwada ka hor intaadan bilaabin daaweynta.
Daawadan looma ogola inay dumarku adeegsadaan. Haweenka uurka leh waa inaysan isticmaalin dawadan. Tani waa sababta oo ah dawadu waxay dhaawici kartaa uurjiifka. Haweenka naas nuujiya, ama kuwa doonaya inay carruur dhalaan, waa inay ka fogaadaan isticmaalka dawadan. Xaqiiqdii, haweenka guud ahaan waa inaysan isticmaalin Degarelix.
Amni ma ahan in la qaato Degarelix haddii aad qabtid xaalad caafimaad oo hooseysa. Hubso inaad la socodsiiso dhaqtarkaaga haddii aad qabtid cudurka QT syndrome, oo ah dhibaato wadne naadir ah oo sababi karta suuxitaan, garaaca wadnaha oo aan caadi ahayn, ama geeri kadis ah. Waa inaad sidoo kale u sheegtaa dhakhtarkaaga haddii aad qabtid wadne, kelyo, ama cudurka beerka. Sidoo kale u sheeg dhakhtarkaaga haddii aad leedahay ama aad ku aragto sodium, magnesium, potassium, ama kaalshiyam ama kaalshiyam ama dhiig kalsiyam ah.
Waxa kale oo muhiim ah in aad u sheegto farmasiigaaga ama dhakhtarkaaga haddii aad xasaasiyad u leedahay dawooyinka qaarkood ama maaddooyinka qaarkood. Tani waxay u oggolaan doontaa iyaga inay ogaadaan haddii aad xasaasiyad ku leedahay duriinka Degarelix.
(2) Qiyaasta Cirbadaha Degarelix
Degarelix wuxuu ku yimaadaa laba qaab:
Xilliga xirmooyinka '120 mg': Hal-ku-isticmaal kasta oo ka kooban waxaa ku jira 120 mg oo budada Degarelix ah sida Degarelix acetate.
Xilliga xirmooyinka mg ee '80 mg': Mid kasta oo la isticmaalo vial waxaa ku jira 80 mg of Budada Degarelix sida Degarelix acetate.
Degarelix wuxuu ku yimaadaa qaab budo ah, oo lagu qasi karo dareere laguna durayaa maqaarka hoostiisa aagga caloosha, meel u dhaxaysa feeraha iyo feedhka. Marka ugu horreysa ee aad hesho dawadan, waxaa lagu siin doonaa laba irbadood oo Degarelix ah. Kadib qiyaasta tallaalka mudista ah ee Degarelix, waxaad heli doontaa keliya hal duri inta lagu jiro booqashooyinkaaga dabagalka billaha ah.
Qiyaasta bilowga ah sida caadiga ah waa Degarelix 240 mg loo maareeyay sida irbado hoosaadyada 2 ee Degarelix 120 mg midkasta oo ku urursan 40 mg / mL. Kadib qiyaasta hore, waxaad heli doontaa kaliya hal duriin hoosaad ah oo ah 80 mg at urursiga 20 mg / mL maalin kasta 28.
Markaad qaadaneyso duriin Degarelix, waa inaad iska ilaalisaa inaad xirato dhar dhaadheer, dhexda ama suunka dhexdaada halkaas oo laga mudi doono. Ka dib marka aad hesho mudista Degarelix, hubi in dhexdaada ama suunkaagu aanu cadaadis saarin aagga mudista. Waa inaad sidoo kale iska ilaalisaa xoqitaanka ama xoqista aagga daroogada lagu duray.
Daaweynta calaamadaha kansarka qanjirka 'prostate' ee ku tiirsan testosterone ee koritaanka waxay u baahan tahay heer joogto ah oo xakamaynta hormoonnada. Si taas loo gaadho, waa lama huraan in Degarelix acetate loo maareeyo sida ugu dhakhtarku kugula taliyay.
Si loo hubiyo in daawada Degarelix ay caawineyso xaaladaada, waxaad ubaahan kartaa inaad mari doonto baaritaanada dhiiga si joogto ah. Hubso inaad ilaaliso dhammaan ballamahaaga ballamaha ee dhakhtarkaaga.
Waa inaad sidoo kale ogaataa in duriinka Degarelix uu saameyn ku yeelan karo natiijada baaritaanada caafimaad qaarkood. Markaad dawo qaadatid, hubi inaad u sheegtid dhakhtarkaaga inaad ka heshay dawadan markii aad samaynayso tijaabooyinka caafimaad ee ku xiga.
Hormoonka labka ah ee testosterone ayaa la sheegay inuu hurinayo koritaanka unugyada kansarka qanjirka 'prostate'. Daawooyinka ka hortagaya sambabada inay soo saaraan testosterone waxaa loo yaqaanaa inay yareeyaan ama joojinayaan koritaanka unugyada kansarka qanjirka 'prostate'. Waxa kale oo jira dawooyin xannibaya ficil-celiyaha testosterone iyaga oo jaray bixinta hoormoonka ragga ee unugyada kansarka.
Budada Degarelix (214766-78-6) wuxuu ku shaqeeyaa yareynta xaddiga testosterone ee jirku soo saaray. Waxay sidaas u sameysaa iyada oo xayiraad ku qaadeysa dadka qaata GnRH qanjirka 'pituitary gland' ee maskaxda. Tani waxay ka hortagtaa soo saarida hormoonnada luiteiniting, sidaas awgeed waxay ka hortagaysaa in tijaabooyinku soo saaraan testosterone.
Sida dawooyinka kale ee kansarka, Degarelix waxay ula falgali kartaa daawooyinka kale iyo waxyaabaha geedaha ka sameysan. Kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah noocyada daawooyinka ee sababi kara is-dhexgalka markii la isla isticmaalo Degarelix:
Qaar ka hortagaya borotiinka borotiinka
Ka hortagga dawooyinka lidka-tricyclic
Xulashada Serotonin Reuptake Inhibitors
Disopyramide, iyo kuwa kale.
Markii lala wadaago Degarelix, daawooyinka qaarkood waxay kordhin karaan halista nooc ka mid ah garaaca wadnaha aan caadiga ahayn ee loo yaqaan 'QT'. Khatar weyn ayaad ugu sugan tahay xaaladdan culus iyo dhibaatooyinkeeda haddii:
Ma da 'weyn yihiin (65 sano iyo wixii ka sii weyn)
Hayso taariikh qoys ee garaaca wadnaha oo aan caadi ahayn ama wadne xanuun
Hayso taariikh kadis ah wadna deg deg ah
Hayso garaaca garaaca wadnahaaga ama garaaca wadnahaaga
Yeelo muddo kororsi lagu dhasho oo ah dhaxalka QT
Waxaa istaroog ku dhacay
Leh kaalshiyam hooseeya, magnesium, ama heerarka kaalshiyamka
Haddii aad qabtid mid ka mid ah xaaladaha kor ku xusan, ama aad u qaadaneyso daawooyin qaarkood si aad u maareyso xaalad caafimaad oo kasta, waxaa muhiim ah inaad u sheegtid takhtarkaaga ka hor intaadan isticmaalin daawada Degarelix. Hubso inaad u sheegto farmasiilahaaga ama takhtarkaaga dawooyinka la qoro, daawooyinka la soo iibsado, kuwa nafaqada leh, waxyaabaha geedo leh iyo fiitamiinnada aad qaadaneyso ama aad qorsheynayso inaad qaadatid. Tani waxay kaa caawin doontaa ka hortaggaaga daawooyinka sababi kara is-dhexgalka Degarelix.
Waa muhiim inaad takhtarkaaga kala hadashid xaaladahaaga caafimaad iyo daawooyinka aad u qaadaneyso sababo dhowr ah awgood. Marka hore, waxay awood u siineysaa dhaqtarka inuu kaala hadlo sida isticmaalka dawadan daawooyinka kale ay saameyn ugu yeelan karto xaaladaada caafimaad. Dhakhtarkaaga ayaa waliba kuu sheegi doona sida xaaladaada caafimaad ay saameyn ugu yeelan karto qaadashada, iyo sidoo kale waxtarka Degarelix. Dhakhtarkaaga ayaa waliba kuu sheegi doona haddii la-socod gaar ah loo baahan doono.
Ma jiro khibrad caafimaad oo kusaabsan khataraha laxiriira maqnaanshaha ama xad dhaafka Degarelix. Si kastaba ha noqotee, waa inaadan joojin dawooyinkaan adigoon la tashan dhaqtarkaaga. Haddii ay dhacdo inaad seegto ballanka duritaankaaga Degarelix, wac takhtarkaaga si aad u hesho tilmaamo.
Tan iyo markii ay Degarelix acetate Waa inuu dhakhtar maamusho, waa wax aad u yar in xad-dhaaf xad-dhaaf ah uu dhici karo. Haddii ay dhacdo in ka badan xad dhaafka dawada 'Degarelix', si kastaba ha noqotee, waa muhiim inaad u wacdo xarunta xakamaynta sunta ama si dhakhso ah u raadso daryeel caafimaad. Diyaar u noqo inaad muujiso ama sheegto waxaad qaadatay, intaad qaadatay, iyo goorta aad qaadatay.
Sida dawooyinka kale oo badan, Degarelix waxay sababi kartaa waxyeelo kala duwan. Waxyeelooyinka soosaarka Degarelix waxay noqon karaan kuwo sahlan ama daran, sidoo kale waxay noqon karaan kuwa ku meelgaar ah ama mid joogto ah. Waxyaabaha soo socdaa waa kuwa caanka ah Saamaynaha dhinaca Degarelix, taas oo dad badani aysan la kulmayn qof walba oo qaata dawadan:
Cabirka xiniinyaha oo yaraaday
Baahida loo qabo in la kaadsho marar badan
Kaadida inta badan
Maqaarka maqaarka ee goobta duritaanka, sida xanuun, casaan, adkaansho, barar
In kasta oo inta badan waxyeellooyinka dawooyinka Degerelix ee aan kor ku soo sheegnay aan khatar ahayn, waxay u horseedi karaan dhibaatooyin culus haddii ay muddo sii joogaan. Waa muhiim inaad raadsato caawimaad caafimaad haddii aad dareento waxyaabaha soo socda ee aan dhifka ahayn, laakiin waxyeelada daran:
Barar aan caadi ahayn
Jab jab ama xanuun
Naas-nuujinta iyo bararka
Astaamaha hargabka, sida qufaca, qandhada, miyir-beelka, iyo cuno-xanuun
Ku darso kolestaroolka dhiigga
Ku garaac dhiig karka
Maaddaama Degarelix ay yaraynayso soo-saarka testosterone, waxay sababi kartaa heerar hooseeya unugyada dhiigga cas, xaalad loo yaqaan dhiig-yaraan. Calaamadaha dhiig yaraantu waxaa ka mid ah dawakhaad, maqaar midabkeedu kacsan yahay, daal aan caadi ahayn iyo / ama neefsashada oo yaraata, waxaa muhiim ah inaad dhaqso ula xiriirto dhaqtarkaaga. Dhakhtarkaagu wuxuu samayn doonaa baadhitaano dhiig waqti ka waqti si loo kormeero tirada unugyada cas ee dhiigaaga.
Degarelix ayaa sidoo kale la sheegay inay kordhineyso halista cudurka macaanka. Haddii aad sonkorow qabto, waxaa muhiim ah inaad sameyso baaritaanno joogto ah si aad ula socoto heerarka sonkorta dhiiggaaga.
Degarelix ayaa sidoo kale la sheegay inay kordhineyso halista osteoporosis. Waxay u horseedi kartaa lafta inay khafiifiso oo ay si fudud u jabto. Haddii aad hore u leedahay osteoporosis, waxaa muhiim ah inaad u sheegto dhaqtarkaaga si loo go'aamiyo sida xaaladaada caafimaad ay saameyn ugu yeelan karto qaadashada Degarelix.
Bukaanka qaar waxay la kulmi karaan waxyeelada Degarelix oo aan aheyn kuwa kor lagu soo xusay. Haddii aad la kulanto wax calaamad ah oo kaa dhigaya raaxo darro ama walwal ku haya, waxaa ugu wanaagsan inaad takhtarkaaga la kulanto dib u dhac la'aan.
Dhakhtarkaagu waxaa laga yaabaa inuu kugula taliyo inaad joojiso qaadashada irbadaha 'Degarelix' haddii aad la kulanto astaamo wadne istaag. Calaamadahaas waxaa ka mid ah xanuun deg-deg ah oo xanuun ah, xanuun xagga dambe u dareeraya, dareenka cadaadiska ama isku-qabsiga xabadka, lallabbo daran, matagid, dhidid, iyo / ama walwal.
Dhakhtarkaagu waxa kale oo laga yaabaa inuu kugula taliyo inaad joojiso isticmaalka Degarelix haddii aad la kulanto calaamadaha fal-celinta xasaasiyadda daran. Calaamadahaas waxaa ka mid ah cudurka anjioedema, oo lagu garto finan, neefsashada oo adkaata, iyo bararka wajiga, afka, gacmaha iyo / ama cagaha.
Waxaa jira noocyo kala duwan Digniinta Degarelix in maskaxda lagu hayo. Midkood ayaa ah in dawadan ay ku gudbi karto dareeraha jirka (matag, kaadi, dhidid, saxarada). Sidaa daraadeed, waa inaad ka fogaataa u oggolaanshaha dheecaanka jirkaaga inuu taabto gacmahaaga ama qof kale maqaarkaaga iyo waxyaabaha kale ee lagu buufiyo ugu yaraan saacadaha 48 ka dib markaad qaadatay durista Degarelix.
Xannaaneeyayaasha waxaa lagula talinayaa inay xidhaan galoofisyada gaduudka oo ilaalin ah inta aad nadiifinayso dareeraha jidhka bukaanka iyo marka aad wax ka qabanayso dharka wasakhaysan ama xafaayadda. Dharka wasakhda ah iyo dharka gogosha ah waa in sidoo kale laga maydhaa meel gooni ah dharka kale.
In kasta oo ay jiraan waxyeellooyin dhinaca Degarelix ah oo laga walwalo, waxa kale oo jira qaar ka mid ah dheefaha Degarelix ee loo baahan yahay in la sugto marka la isticmaalayo dawadan. Daraasadihii cilmibaarista, waxaa lagu muujiyey in durista Degarelix ay bixiso dhimis dhakhso leh heerarka testosterone marka loo eego daaweynta kale ee daaweynta daaweynta hormoonnada convectional. Daawadan badanaa ma keento qalliinka hormoonka 'testosterone' oo sababi kara calaamadaha ku-meel-gaarka ah ee calaamadaha.
Faa'iidada kale ee Degarelix waa in daroogada guud ahaan si fiican loo dulqaato, marka laga reebo daraasad la sameeyay ayaa muujisay in jawaab-celinta cirbadaha ay ka dhacday boqolkiiba 40 ee aayadaha kooxda Degarelix ee <1 boqolkiiba kooxda leuprolide. Waxqabadkaani badanaa waa mid dhexdhexaad ah ama dhexdhexaad ah, oo waxay u badnaayeen kadib mudistii ugu horeysay.
Xog hordhac ah oo laga helay dhowr daraasadood oo caafimaad ayaa muujinaya in marka la barbar dhigo agonists LHRH, Degarelix waxaa lala xiriiriyay si aad u sarreysa oo guud ahaan badbaadada gudaha 1st sanadka daaweynta. Xaqiiqda ah in fursadaha si guul leh loogu daaweyn karo kansarka qanjirka 'prostate' ay ka sarreeyaan markii la isticmaalayo daaweyntan ayaa ka mid ah faa'iidooyinka Degarelix ee ka dhigaya dawadan inay tahay in la isku dayo.
Degarelix iyo qamriga
Ku qaadashada khamriga xaddi yar uma muuqato inay wax u dhimayso waxtarka ama badbaadada degenaanshaha. Si kastaba ha noqotee, waa inaad had iyo jeer iska ilaalisaa qaadashada khamri aad u badan markaad qaadaneyso dawadan.
Haddii adiga ama qof aad jeceshahay aad qabtid kansarka qanjirka 'prostate, Degarelix kemotherapy waa shaki la'aan mid ka mid ah xulashooyinka daaweynta ugu fiican ee aad dooran karto. Sababta kaliya ee loo malayn karo ee sababta aad u dooran karto qalliinka dawaynta hormoonnada sida Degarelix waxay noqon doontaa kharash. Si kastaba ha noqotee, wixii kharash ah oo kala duwanaan ah ayaa lagu dabooli doonaa dheefaha Degarelix.
Waxaad u badan tahay inaad ka yaaban tahay qiimaha Degarelix. Celceliska qiimaha sanadlaha ah ee daaweynta Degarelix waa qiyaastii $ 4,400. Tani waxay la jaan qaadaysaa qiimaha daaweynta kale ee la heli karo ee daaweynta hormoonnada kansarka qanjirka 'prostate'. Qiimaha mudista Degarelix ee mudista 80 mg waa inta u dhaxaysa $ 519 siinta hal budo oo loogu mudo. Qiimaha sidoo kale wuxuu ku xirnaan doonaa farmashiyaha aad booqato.
Waxaad sidoo kale la soo bixi kartaa "Degarelix ka iibsato internetkaXayeysiis. Si kastaba ha noqotee waxaad u baahan doontaa inaad aad uga taxadarto markaad iibsanayso daroogada qadka. Hubso inaad sameyso baaritaan dhab ah oo habboon iyo taxaddar ku habboon ka hor intaadan daawada ka iibin iibiyaha internetka. Hubso in alaab-qeybiyaha ama farmashiiyaha internetka uu yahay mid sharci ah iyo in waxa ay iibinayaan ay yihiin qaab sharci ah oo daaweyn ah.
Degarelix waa in lagu kaydiyaa heerkulka qolka. Hubso inaad ka ilaaliso dawadan iftiinka iyo qoyaanka. Sida daawooyinka kale, ka ilaali Degarelix meel carruurtu ka gaarto.
Ha ku tuurin budada Degarelix qashinka guryaha ama biyaha wasakhda ah, tusaale ahaan musqusha ama haanta qubayska. Weydii dhakhtarkaaga ama farmashiistaha sida loo tuuro dawooyinka dhacay ama aan sii soconaynin.
Van Poppel H, Tombal B, et al (Oktoobar 2008). Degarelix: hormoon cusub oo gondotropin sii deynaayo (GnRH) xannibaada-ka-soo-bixinta hal-sano, multicentre, aan kala sooc lahayn, daraasad laba-daawo-qaadasho ee daaweynta kansarka qanjirka 'prostate'. Ciid. Urol. 54: 805-13.
Maktabadda Qaranka Mareykanka ee Machadyada Qaranka ee Caafimaadka, Falanqaynta qarash-ku-saabsanaanta ee ka mid ah degaanrelix ee daaweynta kansarka qanjirka ka hortagga ee hormoonka ee Boqortooyada Ingiriiska, Lee D1, Porter J, Brereton N, Nielsen SK, 2014 Apr; 17 (4) ): 233-47.
Gittelman M, Pommerville PJ, Persson BE, et al (2008). Sannad 1 ah, calaamad furan, wejiga II ee qaddarka sahaminta daraasadda qaddiyadaha loogu talagalay daaweynta kansarka qanjirka 'prostate' ee Waqooyiga Ameerika. J. Urol. 180: 1986-92.